Namoaka Sary Tao Amin’ny Twitter Ny Japoney Mba Hanaporofona Fa Monina Any Ankodahoda Ry Zareo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2016 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, Français, English
Inaka ao Japana (Mikata, Prefektioran'i Fukui). Sary avy amin'i Nevin Thompson.
Inaka no teny Japoney hoe “ambanivohitra”, ary midika hoe “faritra ambanivolo” miaraka amin'ny fanasongadinana lehibe ny hoe “faritra misy ala” na “hazo.”
Anisan'ny fanamby malaza ankehitriny ao amin'ny Twitter Japoney miaraka amin'ny tenirohiny manokana ihany koa izany. Araka ny tatitra avy amin'ny tranonkala Japoney Fundo: “Asehoy fa monina ao inaka tsy mampiasa ny teny inaka ianao” (#田舎という言葉を使わないで田舎を表現, inaka to iu kotoba wo tsukauwanaide, inaka wo hyogen).
Eo amin'ny ampahefatry ny mponin'i Japana eo no monina ao an-tanàn-dehibe be mponina manodidina an'i Tokyo sy Osaka, ahitana olona marobe monina ao amin'ny faritra andrenivohitra misy metro, tsena sy fotodrafitrasa marobe. Na dia mety misy aza ny lamasinina hipoka olona sy ny toerana maitso vitsivitsy, tsara kokoa ny monina ao an-tanàn-dehiben'i Japana.
Ka fomba tsara inona no hampisehoana fa monina ao inaka ianao raha tsy amin'ny alalan'ny sary mampiseho fa ny magazay akaiky indrindra dia mihoatra ny 100 km, araka ny nataon'ny mpisera Twitter iray?
JUSCO: Manitsy hatrany mankany amin'ny 110 km.
Inaka dia mifandray amin'ny tanimbary, izay midika famatsiana vary vaovao tsy tapaka avy amin'ny toeram-pambolena. Matetika, tsy maintsy totoina ny vary alohan'ny handrahoana azy. Toerana mahazatra ao amin'ny faritra ambanivohitra maro ny kioska mpitoto vary amin'ny alalan'ny fandoavana vola madinika:
Tiako ity tenirohy ity.
Mpisera Twitter hafa nanome fampisehoana marani-tsaina momba ny inaka amin'ny fampiasana tarehintsoratra Shinoa roa fotsiny:
Tamin'ny sioka, ny tarehintsoratra amin'ny trano 家 (ie) dia voahodidin'ny tarehintsoratra saha, 畑 (hatake).
Indraindray, mampiseho famerana tsy ampoizina mikasika ny fomba ahafahan'ny olona mivelona ny fiainana ambanivohitra:
Hoy ny vakin'ny sary: Naoty: Nangataka ny tantsaha eo an-toerana mba hakatonao ny lambam-baravarana amin'ny alina. Manana olana amin'ny fitomboan'ny ny freziny izy ireo. Toa mampiadana ny fitomboan'ireo frezy ny jiro avy ao amin'ny varavarankelin'ny efitrano fatoriana iombonana. Misaotra anao noho ny fiarahamiasa. Birao mpitantana.
Tsy voatery misy foana araka ny tianao ny fitateram-bahoaka, araka ny asehon'ity fandaharam-potoana fandalovan'ny fiara fitateram-bahoaka ity:
Fanamarihana: Natao hitovy amin'ny fandaharam-potoana mampiavaka ny Japoney amin'ny fiandrasana fiara fitateram-bahoakan'ny firenena ity sioka ity. Amin'ny 8:20 hariva no tonga ny fiara fitateram-bahoaka farany.
In-telo isan'andro ihany no tonga ny fiara fitateram-bahoaka, ary mifarana amin'ny 8:20 hariva ny asa.
Mpisera Twitter iray hafa nandefa sarina takelaby famantarana eny an-dalana izay mety mbola tsy nisy nahita tao an-tanàndehiben'i Japana :
Dikan'ny takelaka: “Fiampitan'ny Foza, Jiona hatramin'ny Septambra”
Dikan'ny sioka: miampita arabe eto ny foza mandritra ny lohataona.
Amin'ity sary nalefan'ny mpisera Twitter iray avy ao Tochigi, avaratra atsinanan'i Tokyo ity, nahatara ny fiasan'ny lamasinina ny lambo teny amin'ny lalamby.
Lamasinina nifandona tamin'ny lambo
Ny fahitana bibidia eny afovoan'ny tanàna dia tena inaka, tahaka ny akoholahy an'ala.
Akoholahy an'ala mandehandeha eny afovoan'ny “arabe fandalovan'ny fiara”.
Na ny kamoshika mpivady (karazana antilopa monina any an-tendrombohitra):
Ary ao amin'ny firenena izay manjaka fa tsy maningana ny fandrakofan'ny tambajotra finday eny rehetra eny, misy sary iray ity milaza mazava ho azy ny inaka:
“Tsy voarakotry ny tambajotra finday aorian'ity toerana ity”